Naya Post Nepal | अन्तत नाबालिग र बाबुले बयान फेरेपछी दुर्गेश थापाले बकपत्रमा यस्तो भने (भिडियो)
अन्तत नाबालिग र बाबुले बयान फेरेपछी दुर्गेश थापाले बकपत्रमा यस्तो भने (भिडियो)
काठमाडौं – पल शाह प्र”क’र”णमा यति बेला नयाँ नँया ट्विस्ट आइरहेका छन् । हिजो सोमबार नाबालिग गायिकाले बयान फेरे पछि आज उनका बुवाले पनि ब”या’न फेरका छन् । अर्थात पल माथि लागेका आ’रो”’प यति बेला सत्य साबित हुँदै गैरहेका छन् ।
हालै नाबालिगको बुवाले फेरको खबर बाहिर आइरहेका बेला दुर्गेश थापाले पनि बकप’त्र दिएका छन्। ‘दुर्गेशले सो क्रममा दुई जनाको विषयमा आफुले केही थाहा नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन् दुई जनाको विषयमा मलाई थाहा छैन। मैले सुनेको मात्र हुँ ।
मंगलबार जिल्ला अदालत तनहुँमा पीडित भनिएकी बालिकाका वुबाले बयान फेर्दै जर्बजस्ती कर णी नभएको बताएका हुन् । उनले उजुरीमा ब ला ”त्का’र भने पनि अदालतमा बयान दिने क्रममा ब ला ‘त्का”र नभएको बताएका छन् । बाँकी जानकारी भिडियोमा हेर्नुहोला :-
किनकि मैले ३० वर्षको कला यात्रा र व्यक्तिगत जीवन मेरो लागि धेरै कुरा गरिसकेँ। अब म अरुको लागि केही गर्न चाहन्छु। त्यसैले म गौण बन्दा केही छैन।
मेरो उद्देश्य के हो भने हाम्रो मुलुकमा महिला पछाडि छन्, महिलाको कार्यक्रममा महिलालाई ३३ प्रतिशत हैन, ५० प्रतिशत नै आरक्षण चाहिन्छ भन्ने सुन्छु। तर भनिए अनुसार ३३ प्रतिशत सहभागिता छ त ? त्योतर्फ पनि ध्यान जानुपर्‍यो।अहिलेको लागि तपाई मलाई कलाकार भनेर बिर्सनुस्, नेपाली नारी मात्र मान्नुहोस्। मेरो सहभागिता राजनीतिसँग छ। त्यसरी सोध्दा सकारात्मक नै मान्नुपर्छ।
५) कलाकारितामा तपाईँको सक्रिय ३० वर्ष थियो। तपाईँ निर्माणको काममा पनि लाग्नु भएको थियो, त्यही क्षेत्रको विकासको लागि किन नलाग्नुभएको? यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नलागेको भए, मलाई कसैले पनि अहिलेसम्म करिश्मा मानन्धर भनेर सम्झिँदैन थिए। हामी सबै कलाकार सबै यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नै लागिपरेको हो।देशमा राजनीतिक शक्तिको स्थायित्व नहुँदा त्यसको असर सबै क्षेत्रले भोग्नु पर्छ।
हाम्रो कला क्षेत्रमा पनि धेरै उतारचढाव आउँछ। भूकम्पले चलचित्र क्षेत्रलाई अप्ठेरो पार्‍यो, कोभिड १९ ले त कति हल बन्द नै भए।कलाकार भएपछि आफ्नो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन त लागिपरिन्छ नै, तर म अहिले सक्रिय भएर हिँड्न सक्ने समय छैन। साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह, स्वस्तिमा खड्का लगायतका कलाकारहरुले जसरी काम गरेर हिँड्ने मेरो समय छैन ।
त्यसरी काम गर्ने बेला हुन्छ। अब मैले गर्ने सहयोग फरक किसि मको हुनसक्छ।राजनीतिमा तपाईँको उपस्थितिले के फरक पार्ला ?म बोल्छु।अहिले म सदस्यमात्र हुँ। कलाकार भएको नातालेमात्रै धेरै सञ्चार माध्यमले मलाई ठाउँ दिएका हुन् । पार्टीभित्रकै कतिपय महिला साथीहरुले भन्ने गरेको सुनेको छु, उहाँलाई यति धेरै महत्व किन ? भनेर भन्ने गरेको सुनेको छु। हो उहाँहरुले भनेकोमध्ये नयाँ कुरा के हो भने म नयाँ हुँ। मैले धेरै काम गर्न बाँकी छ।
तर मेरो तर्फबाट आफ्नो स्थानमा रहेर म बोल्न सक्छु।त्यो ठूलो बल हो। पछि मैले के पद पाउँछु, त्यो फरक कुरा हो।७) नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको छोड्ने बेलामा तपाईले आफू थप्पडी बजा उन मात्र पार्टीमा नरहने भन्नुभएको थियो, एमालेमा तपाईँको उपस्थिति कस्तो हुन्छ होला ?म ‘फाइटर’ हो।
म एकदमै जुझारु छु। मेरा बोल्ने शैली, अरुलाई भन्ने तरिका फरक हुन्छ। म आफूलाई ठीक हुने ठाउँ पाइन भने म प्रश्न गर्छु। तर पहिला मेरो योगदान पनि हुनुपर्‍यो। त्यसपछि म प्रश्न तेर्स्याउँछु।हामी कुनै पनि क्षेत्रमा लाग्छौँ, त्यो क्षेत्रमा लागेपछि त्यसले केही प्रतिफल त दिन्छ नि! त्यसको लागि काम गर्ने हो।
अहिलेसम्म केही कुरा पनि भएको छैन। तर म पदको आकांक्षी हो।कुनै पनि मानिसलाई पदको आकांक्षा भएन भने उसको प्रगति रोकिन्छ। मेरो आकांक्षा ‘गुड कज’ का लागि हो।
९) स्थानीय चुनाव आउन लाग्यो, तपाईँ भिड्दै हुनुहुन्छ कि ?मैले अहिलेचाहिँ केही सोचेको छैन, म चाहन्छु मलाई मेरो पार्टी, नेतृत्वले मलाई निर्देशन गरोस्, मलाई सहयोग गरोस्, मार्गनिर्दे शन गरोस्। म महिलाहरुको लागि, बालबालिकाहरुको लागि केही गर्न चाहन्छु। आफ्नो क्षेत्रको लागि केही गर्न चाहन्छु। उहाँहरुले मलाई त्यो प्रकारले अगाडि लैजानुहुन्छ।
१० ) नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी छोडेपछि विद्यालय जानुभयो, स्नातकसम्म पुगपछि तपाईँ फेरि राजनीतिमा आउनु भएको छ, बीचमा चाहिँ केही पढेर आउँ भनेर हो?शिक्षाकै लागि हो नि। मैले धेरैपल्ट भनेको छु। शिक्षा कुनै पनि मेरुदण्ड हो, हरेक नाग रिक शिक्षित भयो भने यो कुरीति हटाउन अनेक किसिमको कार्यक्रमहरु गर्नै पर्दैन।
शिक्षाले नै जागरण हुन्छ।जुन देशको महिलाहरु सशक्त छन्, त्यो मुलुक समृद्ध हुन्छ। जसरी महिला भएको घर राम्रो हुन्छ। फूलको गमला कहाँ राख्ने, भान्छामा सामान कहाँ राख्ने, बेडरुम कस्तो हुनुपर्छ, छोराछोरी कस्तो हुनुपर्छ, परिवारका सदस्य कसरी राम्रो हुने भन्ने महिला राम्रो भइन् भने हुन्छ। त्यसैले महिला राम्रो हुनुपर्‍यो। महिलालाई राजनीतिमा पनि अगाडि लग्यो भने देश राम्रो हुन्छ।औपचारिक शिक्षालाई म किन जोड दिन्छु भने, यसले मलाई धेरै फाइदा भयो।
शिक्षाले ल्याएको परिवर्तन म आफैले महशुस गरेको छु। पार्टीमा पनि सबै महिला उत्तिकै सशक्त सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने छैन। यदि सबै महिला सक्षम भए भने पार्टी कहाँ पुग्छ, देश कहाँ पुग्छ ?१०) नयाँ शक्ति छोडेपछि तपाईँले एमाले नै किन रोज्नुभयो ?समाजवाद भनेर हामी भन्छौँ। धेरै अगाडिदेखि यो सिद्धान्त अभ्यासमा छ, कतिपय देशमा यो सिद्धान्तलाई नयाँ रुपमा लैजाने बेला भइसकेको छ।
तर हामी विकाशशील देश हौँ। यहाँ विविधता छ। धनी सारै धनी गरिब असाध्यै गरिब छन्। ती सबैलाई समेट्न समाजवाद आ वश्यक छ नै। त्यही भएर नै म डा. भट्टराईसँग आवद्ध थिए।मेरो अहिले पनि फरक खालको विचार हैन। तर राम्रो अनि ठूलो पार्टीमा आवद्ध भएर अगाडि बढ्दा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुन्छ।११ ) एकपल्ट केपी ओलीले फोन गरेको भन्ने सन्दर्भ आएको थियो, त्यो बेलादेखि नै होला हैन एमाले प्रवेशको सन्दर्भ बनेको हो?
सोच पहिलादेखि नै थियो। तर त्यसलाई संयोग नै भन्नुपर्छ। मैले अघि नै भनेँ नि, तपाईँ जे राम्रो मनले चाहनुहुन्छ, त्यो तपाईँको अगाडि नै आइपुग्छ। म त्यही सोचिरहेको थिए, उहाँ को साथीभाईसँग कुराकानी गर्दै थिए। उहाँले कतैबाट थाहा पाउनु भयो कि, केपी जि ले फोन गर्नुभएपछि म सारै खुसी भए। त्यो मलाई उहाँसँग भेट्ने बाहाना बन्यो। सम्बन्ध भयो।१२ ) कलाकारिता क्षेत्रमा राजनीतिक चेत कस्तो पाउनुहुन्छ?
२०७९ बैशाख ६, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 8589 Views